Britain oo ku howlan Soomaliya - BBC News Somali
Image caption Britain ayaa shir u qabanaysa Soomaaliya
Britain waxay ay shir ku qabanaysaa magaalada london bisha Febraayo, kaasi oo la isugu keenayo dalalka ku lug leh ee geeska Afrika. Waxaana la filayaa in go'aamo muhiim ah laga gaaro shirkaasi, laga bilaabo gargaar bini'aadam ilaa howl galo miltari.
Maqaal lagu soo daabacay wargayska the Indepent ee dalka Britain ayaa faallo ka qoray arrintaasi.
Wargeyska the independent waxaa maqaalkiisa uu ku bilaabay in go'aanka Ra'iisul wasaaraha Britain uu ku sheegay in uu doonayo in uu wax ka qabto mushkilada Soomaliya in dadka qaar ay u arkaan in uu yahay mid ka dhashay guulaha uu ka gaaray faragelinta uu ku sameeyey dalka Libya.
Madaxa laanta sirdoonka Britain
Somalia waxay noqn doontaa meesha xigta ee hoyiga u noqn karta argigixisada Pakistan kadib
Madaxa Laanta Sirdoonka ee Britain ee M15 Jonathan Evans
David Cameron, waxaa uu ka walaacsanyahay dalxiisayaasha iyo shaqaalaha gargaarka ee lagu weerayo Soomaliya, sara u kaca weerarka burcad baddeeda, iyo cabsida ah in waddamada Bariga Afrika ay noqdaan goobo lagu faafiyo fikradaha xagjirka ah iyo saameynta ay arrintaas ku yeelan karto da'yarta muslinka ah arrintaas oo u muuqato, inay ku sii badanayso Britain.
Qodobka ugu dambeeya ayuu wargeysku waxa uu ku tilmaamayaa in ay tahay arrin aad muhiim u ah iyadoo buu leeyaay madaxa laanta sirdoonka ee Britain ee MI5 Jonathan Evans uu ka digay in Somaaliya ay noqn doonto meesha xigta ee hoyga u noqon karta argagixisada kadib Pakistaan.
Waxaa uu Jonathan Evans farta ku fiiqay dhaqdhaqaaqa kooxda Al Shabaab oo la sheegay in ay xiriir la leedahay kooxda al-Qaacida. Kuwa doonaya in ay ka qeybqaataan jihaadka ma noqon doonaan Soomaliya oo kaliya, ayuuu sheegay sarkaalka waxaa uuna intaasi raaciyey in ay sidoo kale ka imaan karaan waddamada Yemen, Pakistan, Bangladesh iyo Waqooyiga Afrika iyo waliba dadka ku laabanaya Britain.
Madaxa laanta sirdoonka waxaa uu sheegay in ay jirto qatar muuqata oo ah in dadka ka soo laabanaya Soomaliya in ay weeraro ka geystaan caasimadaha Britain.
Wargaysku waxa uu leeyahay David Cameron waxa uu sidoo kale ka walaacsanyahay falalka burcad badeeda ee sii badanaya iyadoo la sheegayo buu leeyahay in ay jiraan dad Soomali ah qurba joog ah oo ku leh burcad baddeeda kuwaas oo xiriir la leh waddamada khaliijka.
Wargeyska The independent waxaa uu sheegaya in kullanka ka dhici doona London ay ka qeyb geli doonaan DKM ee Soomaaliya, waddamada deriska la ah Soomaliya oo ay ku jiraan Kenya iyo Uganda, hayadaha gargaarka. Hasa yeeshe Eritrea oo lagu eedeynayo in ay xiriir la leedahay kooxda Al-Shaabaab ayaanan laga soo qeyb galinayn.
Waxaa uu intaasi raacinayaa in aanay cadeyn heerka Soomaliland uga qeyb geli doonto kullanka.
Wargeysku waxa uu soo xiganayaa Sarkaal Maraykan ah oo sheegaya in Maraykanka uu si xooggan u taageerayo kullanka ka dhici doona London, iyadoo Maraykanka uu taageerada ugu badan siiyo howgalka nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ka wado Soomaliya.
Soomaaliya oo laga shirayo
Clegg iyo Cameron oo isku dhacay
Safaaradda UK ee Tehran oo la weeraray